सन्तुलित मौद्रिक नीति
६ श्रावण २०७५, आईतवार १०:४२
बजेटबाट निराश देखिएको निजीक्षेत्र मौद्रिक नीतिबाट भने केही आशावादी बनेको छ । वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लाई १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झारिएको छ । नौ प्रतिशत ब्याजदर रहेको १५ अर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोषलाई बढाएर ३५ अर्ब रुपैयाँ पु¥याइएको छ । यसबाट बैङ्कहरुलाई सस्तो ब्याजदरको थप तरलता प्राप्त हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । खासगरी ब्याजदर स्थिरतालाई जोड दिएर आएको मौद्रिक नीतिले ब्याजदर कम गर्न पनि त्यत्तिकै दबाब सिर्जना गरेको छ । गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले असार २७ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै चालू वर्ष आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत हाराहारी प्राप्त गर्ने र मुद्रास्फीति साढे ६ प्रतिशतकै वरिपरि राख्ने उद्घोष गरे ।
पछिल्लो समय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग दूरी बढेको भनेर चर्चामा आएका नेपालले सरकारी लक्ष्यलाई आफैले काँधमा बोकेर हिँडेका छन् । खतिवडा स्वयम् राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर भइसकेका व्यक्ति भएकाले केन्द्रीय बैङ्कले कसरी काम गर्छ भन्नेबारे जानकार छन् । विपरीत राजनीतिक दलबाट गभर्नर र अर्थमन्त्री हुँदा बजेट र मौद्रिक नीतिमा तालमेल नहुने हो कि भन्ने आशङ्कालाई मौद्रिक नीतिले चिरिदिएको छ । उपत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने कुरामा गभर्नर नेपाल एक कदम अघि खुलेर आएका छन् । खासगरी कर्जा लगानी निर्देशित हुनुहँदैन भन्ने मान्यता पाल्ने पाल्ने पक्षका गभर्नर नेपालले नेपालको सन्दर्भमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित नगरी नहुने स्थिति रहेको स्विकार्छन् ।
कर्जा यसअघि जलविद्युत् र पर्यटनमा ५÷५ प्रतिशत ऋण लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा चालू मौद्रिक नीतिले कृषिमा १० प्रतिशत यथावत् राख्दै जलविुद्यत् र पर्यटनमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । खासगरी विगतमा निजीक्षेत्र तथा पुँजीबजारमैत्री भनेर चिनिएका नेपाल निजीक्षेत्रलाई नै उपेक्षा गर्ने तहमा पुगेको आरोप लाग्दै आएको थियो । तर, चालू वर्षको मौद्रिक नीतिले भने बजेटबाट निराश बनेका निजीक्षेत्रलाई केही उत्साहित बनाएको छ भने बजेटबाटै निराश देखिएका सेयर लगानीकर्ता भने मौद्रिक नीतिबाट पनि खासै सन्तुष्ट हुन सकेको देखिँदैन ।
राष्ट्र बैङ्कमा रहँदा उनको यो मौद्रिक नीति चौथो हो । अब उनका लागि एउटा मौद्रिक नीति ल्याउने अवसर रहनेछ । मौद्रिक नीति आए पनि कतिपय नीतिको विस्तृत विवरण भने पछि निर्देशिका, कार्यविधि वा निर्देशनमार्फत आउनेछ । अहिले नीति मात्रै आएकाले केही कुरामा अन्योलता भएको हुन सक्छ,’ गभर्नर नेपालले भने, ‘यसका विस्तृत जाकारी र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा निर्देशिका, कार्यविधि र निर्देशनमार्फत आउने भएकाले त्यति बेलासम्म पर्खनुपर्ने हुन्छ ।’
२०७१ चैतमा राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर सम्हालेका नेपालको यो चौथो मौद्रिक नीति हो । २०७२ वैशाखमा गएको भूकम्प र त्यसै वर्ष करिब ६ महिना लामो नाकाबन्दीपछि खेपेर आएको मुलुकको आर्थिक अवस्था असहज भएकै बेला आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मैद्रिक नीतिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम पुँजी ४ गुणाले वृद्धि गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएपछि आलोचना पनि खेपेका थिए । तर, पुँजी वृद्धि योजना भने उनले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गराए । पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षण कमजोर भएको भनेर आलोचित भइरहेको समयमा उनले मौद्रिक नीतिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले साउनभित्र चालू वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । गभर्नर नेपालले अब बैङ्कहरुले पेस गर्ने बजेटकै आधारमा उनीहरु सुपरिवेक्षण हुने बताए ।
मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउने बाटो लिएको भनेर निजीक्षेत्र उत्साहित बनेको छ । विगतमा उच्च ब्याजदर भयो भनेर ब्याजदर घटाउन माग गर्दै आएको निजीक्षेत्र मौद्रिक नीतिपछि भने केही उत्साहित देखिएको छ । खासगरी बैङ्कहरुले कर्जामा लिने ब्याज र निक्षेपमा दिने ब्याजबीचको अन्तर (स्प्रेड रेट) ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ दशमलव ५ प्रतिशत झारेकाले दीर्घकालमा ऋणीलाई फाइदा पुग्न सक्छ । त्यस्तै अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र वित्त कम्पनी सबैको ४ प्रतिशत कायम हुँदा ४८ अर्ब रुपैयाँ तरलता प्राप्त हुने देखिन्छ । यद्यपि यो तरलता नयाँ परियोजना लगानी गर्न नसकिने भए पनि बैङ्कका आन्तरिक व्यवस्थापनमा उपयोगी हुने देखिन्छ । ऋणपत्र बिक्री गरेमा त्यस्तो ऋणपत्र कर्जा निक्षेप पुँजी अनुपात (सीसीडी)मा गणना गर्न पाइने भएकाले त्यहाँबाट थप तरलता प्राप्त गर्न बाटो खुल्छ । बजेटबाट निराश देखिएको निजीक्षेत्र मौद्रिक नीतिबाट भने केही आशावादी बनेको छ ।
वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लाई १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झारिएको छ । नौ प्रतिशत ब्याजदर रहेको १५ अर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोषलाई बढाएर ३५ अर्ब रुपैयाँ पु¥याइएको छ । यसबाट बैङ्कहरुलाई सस्तो ब्याजदरको थप तरलता प्राप्त हुन्छ । त्यसैगरी राष्ट्र बैङ्कले बोलकबोलबाट उठाइने निक्षेपको ब्याज दरमा पनि अङ्कुश लगाउँदै प्रकाशित ब्याजदरमा १ प्रतिशत मात्र बढी लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । हाल प्रकाशित ब्याजमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म निक्षेप कबुल गर्न पाइने व्यवस्था छ ।
मौद्रिक नीतिका यी उपकरण प्रयोगमा आउँदा ब्याजदर घटाउन महङ्खवपूर्ण भूमिका खेल्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन् । उनले अहिलेको समस्या शोधानान्तर स्थिति (मुलुकबाट बाहिरिने रकम र भित्रिने रकमको अन्तर) सुदृढ बनाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
त्यसैगरी एउटा वित्तीय संस्थाले एउटै सङ्गठित संस्थाबाट यसअघि अधिकतम २० प्रतिशतसम्म निक्षेप लिन पाउने प्रावधानमा कडाइ गर्दै १५ प्रतिशत सीमा कायम गरेको छ । यसले एउटै सङ्गठित संस्थाले एउटै बैङ्कमा ठूलो रकम राख्न नपाउने हुँदा ब्याजदर न्यूनीकरणमा थप सहयोग बन्नेछ । त्यसैगरी ग्रामीण शाखाहरुको निक्षेपमा ३ वर्षसम्म सीआरआर गणना गर्नै नपर्ने व्यवस्थाले पनि बैङ्कहरुमा थप लगानीयोग्य रकम प्राप्त हुनेछ ।
बैङ्कहरुले विदेशी मुद्रामा ऋणपत्र ल्याउँदा उच्च मूल्य पर्ने भएकाले गाह्रो हुने बताइरहेका बेला राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमा डलरमा आउने उतारचढावलाई व्यवस्थित गर्न आफंैले ‘हेजिङ फन्ड’ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट बैङ्कहरुले विदेशबाट सहज रुपमा ऋण ल्याउँदा ब्याजदर घट्न थप मद्दत मिल्नेछ । भारतीय रुपैयाँमा समेत ऋण ल्याउन बैङ्कहरुलाई बाटो खुलेकाले विदेशी मुद्रा ऋण आउन अझ सहज हुनेछ । यद्यपि भारतीय मुद्रामा ऋण ल्याउन पाउने÷नपाउने भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।
नेपाल बैकङ्र्स सङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाले मौद्रिक नीतिले लिएका उपकरण प्रयोग गर्दा अवको केही समयपछि नै डेढ देखि २ प्रतिशत कर्जाको ब्याज घट्ने बताउँछन् । उनले आर्थिक वृद्धि र मूल्य वृद्धि नियन्त्रण सँगसँगै गर्न नसकिने बताए ।
बजेटबाट निराश बनेका सेयर लगानीकर्ता मौद्रिक नीतिपछि पनि निराश नै छन् । आफ्ना माग मौद्रिक नीतिले नसमेटको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेल पुँजीबजारका लागि आवश्यक उपकरण परिचालन गर्ने गरी मौद्रिक नीति नआएको बताउँछन् ।
अझ बैङ्कहरुले दिने कर्जा र लिने निक्षेपमा दिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड रेट) घटाएका कारण नाफा सङ्कुचित हुने उनको बुझाइ छ । नाफा घट्दा बैङ्कहरुले दिने लाभांश घट्न जान्छ । पुँजीबजारमा करिब ८५ प्रतिशत हिस्सा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको छ । यसअघि अन्य क्षेत्र धरासयी भइरहे पनि स्प्रेड कायम राखेका कारण बैङ्कहरुले उच्च नाफा गर्दै आएका थिए ।
सेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा कर्जाको सुरक्षणका लागि राखिएको सेयरको मूल्य लगातार घटेर १० प्रतिशतमै आउने मार्जिन कल बढाएर २० प्रतिशतमा पु¥याएको छ । यसले अहिले घटेको बजारमा लगानीकर्तालाई धेरै नै ठूलो राहत पुग्ने गभर्नर नेपाल बताउँछन् । साथै प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत मार्जिन प्रकृतिको ऋण दिन पाउने व्यवस्थालाई २५ प्रतिशतमा झारिएको छ । तर, यसले तत्कालै वा दीर्घकालमा पनि लगानीकर्तालाई खासै असर गर्दैन । त्यस्तै, व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट सुविधा ७५ लाखबाट घटाएर ५० लाखमा सीमित गर्दाको असर पनि सेयर बजारमा परेको छ । गभर्नर नेपाल पनि ओरड्राफ्ट सुविधा दुरुपयोग गरेकाले घटाइएको बताए ।
बजेटका कार्यक्रमको निरन्तरता
मौद्रिक नीतिले बजेटमा भएका कतिपय प्रावधालाई समेटेको छ । खासगरी महिलाहरुबाट सञ्चालन हुने परियोजनका लागि १५ लाखसम्मको सामूहिक जमानीमा दिइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा वर्गीकृत गरेको छ । महिला उद्यमशीलता विकासका लागि यसमा सरकारले ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम छ । महिलाहरुलाई न्यून ब्याजदरमा १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने नीतिले महिलाहरुलाई उद्योग–व्यवसायमा लाग्न र आर्थिक समृद्धिमा उनीहरुको सहभागिता बढाउन सघाउने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका बैङ्क, वित्त तथा बिमा समितिका सभापति सौरभ ज्योति बताउँछन् ।
‘करिब ५१ प्रतिशत रहेको महिलाहरुको उद्योग/व्यवसायमा न्यून सहभागिता छ,’ उनले भने, ‘यसले महिलाहरुलाई अघि बढाउन प्रोत्साहित गर्छ ।’ त्यस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने कर्जा, आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तृकत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरुलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि दिइने कर्जा पनि विपन्न वर्ग कर्जामा समेटेको छ । यसले बैङ्कहरुले लगानी गर्नैपर्ने विपन्न वर्गको कर्जाको दायरालाई पनि फराकिलो बनाएको छ । यसमा पनि सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनु्दान दिने कार्यक्रम छ ।
सरकारले अघि सारेको सबै नेपालीको बैङ्क खाता खोल्ने अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैङ्कले माध्यमिक विद्यालय र विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई बैङ्क खाता खोल्न प्रोत्साहित गर्नुका साथै साक्षरता अभियान चलाउने भएको छ ।
नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा झन् कडाइ
नियमन र सुपरिवेक्षणमा केन्द्रीय बैङ्क फितलो भयो भनेर आरोप लागिरहेका बेला नियमनको दायरालाई मौद्रिक नीतिले फराकिलो बनाएको छ । अबदेखि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले हरेक साउन महिनाभित्र आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रीय बैङ्कमा पेस गर्नुपर्नेछ । उनीहरुले पेस गरेको बजेट र कार्यक्रम हेरेर सही गतिमा वित्तिय संस्था अघि बढेको छ कि छैन भनेर राष्ट्र बैङ्कले सुपरिवेक्षण गर्नेछ । त्यस्तै प्राकृतिक व्यक्तिको नाममा रहेको बचत तथा मुद्दती निक्षेपलाई थप सुरक्षित गर्न ३ लाख रुपैयाँसम्मको सुरक्षण गर्ने भएको छ । हाल २ लाख रुपैयाँसम्मको मात्रै निक्षेप सुरक्षण हुँदै आएको छ । यसअघि तत्कालीन गभर्नर खतिवडाले पनि ३ लाखसम्म निक्षेप सुरक्षण गराउने भने पनि कार्यान्वयमा भने आएको थिएन ।
राष्ट्र बैङ्कले सबै वाणिज्य बैङ्कलाई प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न लगाउने नीति लिएको छ । यसबाट प्रत्येक प्रदेशमा बैङ्किङ सेवा प्रवाह सरल एवम् प्रभावकारी हुनुका साथै वित्तीय पहुँच र समावेशिता विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ । हाल जिल्लास्तरमा सञ्चालित विकास बैङ्क र फाइनान्स कम्पनीलाई प्रादेशिक संरचनाअनुसार विस्तार गर्ने नीति राष्ट्र बैङ्कले लिएको छ । यसले वित्तीय समावेशिता र पहुँच विस्तारमा थप मद्दत गर्नेछ । निक्षेप दायित्व, कर्जा र सम्पत्तिका आधारमा वाणिज्य बैङ्कका ठूला शाखाको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीका कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीको क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने, विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीले पनि एनएफआएसअनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्नेलगायत नीति अघि सारेको छ । त्यस्तै, भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी सेवा सञ्चालकले चालू आर्थिक वर्षदेखि वार्षिक वित्तीय विवरण प्रकाशन÷सार्वजनिक गर्नुअघि राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रविधिको प्रयोगमा जोड
मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगलाई पनि जोड दिएको छ । वास्तविक समयको भुक्तानी प्रणाली (आरटीजीएस) र राष्ट्रिय भुक्तानी द्वार (गेटवे) स्थापनाको काम अघि बढेको जनाएको छ । एटीएम मेसिन वा पोस मेसिनबाट कारोबार गर्दा कारोबार असफल भई खातावालाको खाताबाट पैसा काटिएमा र निश्चित समयभित्र रकम फिर्ता नभएमा सोअवधिको ब्याजसमेत बैङ्कले दिनुपर्ने नीति ल्याएको छ । यसले कार्ड प्रयोगकर्ताको आत्मविश्वास बढाउनेछ । त्यस्तै वाणिज्य बैङ्कले अनिवार्य रुपमा सूचना प्रविधि प्रणालीको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अन्त्यमा, बजेटबाट केही निराश देखिएको निजीक्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र मौद्रिक नीतिपछि आशावादी देखिएको छ । नेपालमा नीति जहिले पनि राम्रा आउने र कार्यान्वयनमा जाँदा समस्या झेलेर असफल हुने गरेका छन् । त्यसैले केन्द्रीय बैङ्कले आफूले लिएका नीति तथा कार्यक्रमको समयमै सफल कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पहल गर्नुपर्छ । सभापति ज्योतिले भनेझैं सरकार र राष्ट्र बैङ्कले आफ्ना नीति कार्यान्वयनमा तदारूकता देखाएर तीनै तहका सरकारले आफूले ल्याएको बजेट सही तरिकाले खर्च गरेमा अब समृद्धिको आधार तयार हुनेछ । त्यतिबेला आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने र मूल्यवृद्धि लक्ष्यमा सामान्य हेरफेरले खासै अर्थ राख्नेछैन ।
सरकारले अवसर दिए बुट मोडलमा ठूला सडक बनाउछौँ : सीई ग्रुपका अध्यक्ष राजभण्डारीसँगको अन्तर्वार्ता (भिडियोसहित)
अहिलेकै अवस्था रह्यो भने चाहेजति बजार अनुगमन गर्न सकिँदैन– वाणिज्य विभागका महानिर्देशक गौचनसँगको अन्तर्वार्ता
उद्योगीहरुलाई सधैं सकारात्मक सहयोग गर्नुपर्छ, अनि मात्र देशमा उद्योगमैत्री वातावरण बन्छः उद्योगमन्त्री यादव
निजीक्षेत्रको भूमिका स्विकारिएको छैन : पूर्वअर्थमन्त्री काेइरालासँगकाे अन्तर्वार्ता
तल्लो इन्द्रावतीको लाइसेन्स नपाएसम्म नेसनल हाइड्रोले लगानीकर्तालाई लाभांश दिन सक्दैन
'अन्तरिम आदेश मागे फ्याट्ट दिइहाल्ने प्रवृत्ति छ' - सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीसँगकाे अन्तर्वार्ता
दोलखा : फिल्म सिटीको पर्खाइ
काेशी करिडोर बन्न डेढ वर्ष लाग्ने
मुद्रा अवमूल्यन र मूल्यवृद्धि
गण्डकी प्रदेशमा ३ सय होमस्टे बन्दै